တိကျမှုမြင့်မားသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများအတွက်၊ အတိုင်းအတာတိုင်းတာခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဖြစ်စေ ထုတ်လုပ်မှုပြီးနောက် အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းတွင်ဖြစ်စေ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးတိုးတက်စေရေးအတွက် အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတိုင်းအတာတိုင်းတာခြင်းတွင် အခြားစစ်ဆေးရေးနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စက်အမြင်တွင် ထူးခြားသောနည်းပညာဆိုင်ရာ အားသာချက်များရှိသည်-
1. စက်အမြင်စနစ်သည် အတိုင်းအတာများစွာကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း တိုင်းတာနိုင်ပြီး၊
2. စက်ရူပါရုံစနစ်သည် တိုင်းတာထားသော အရာဝတ္ထုကို ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် သေးငယ်သောအတိုင်းအတာများကို တိုင်းတာနိုင်ပြီး၊ တိုင်းတာထားသော အရာဝတ္ထုကို ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် သေးငယ်သောအတိုင်းအတာကို တိုင်းတာနိုင်ပြီး တိုင်းတာမှုတိကျမှုသည် မိုက်ခရိုနအဆင့် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ရောက်ရှိနိုင်သည်။
3. အခြားသော တိုင်းတာခြင်းဖြေရှင်းချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စက်ရူပါရုံစနစ် တိုင်းတာခြင်းသည် မြင့်မားသော အဆက်ပြတ်မှုနှင့် တိကျမှုရှိပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းအွန်လိုင်းတိုင်းတာမှု၏ အချိန်နှင့်တပြေးညီ တိကျမှုကို တိုးတက်စေကာ ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုနှင့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
4. စက်ရူပါရုံစနစ်သည် ကွန်တို၊ အလင်းဝင်ပေါက်၊ အမြင့်၊ ဧရိယာစသည်ဖြင့် ထုတ်ကုန်၏ အသွင်အပြင်အတိုင်းအတာကို အလိုအလျောက်တိုင်းတာနိုင်သည်။
5. စက်ရူပါရုံ တိုင်းတာခြင်း သည် တိုင်းတာထားသော အရာဝတ္တုအား ပျက်စီးစေရုံသာမက အပူချိန် မြင့်မားခြင်း၊ ဖိအားမြင့်ခြင်း၊ အရည်များ၊ အန္တရာယ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင် စသည်တို့ကဲ့သို့ တိုင်းတာထားသော အရာဝတ္တုကို မထိမိနိုင်သော အခြေအနေများအတွက်လည်း သင့်လျော်ပါသည်။ ;
တိုင်းတာခြင်းအပလီကေးရှင်းများသည် ပြတ်သားသောအသွင်အပြင်ပုံများ လိုအပ်သည်။ ကင်မရာတစ်ခုအတွက်၊ ၎င်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပုံရိပ်အရည်အသွေးကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန် လိုအပ်ပြီး၊ ၎င်းတွင် ရိုက်ကူးမှုတိကျမှုသေချာစေရန်အတွက် လုံလောက်သော pixels ရှိရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းတွင် contour edge ၏ မီးခိုးရောင်တန်ဖိုးသည် တည်ငြိမ်ကြောင်းသေချာစေရန်အတွက် ပုံရိပ်ဆူညံမှုအဆင့်နိမ့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော။
မတူညီသော workpiece အရွယ်အစားနှင့် တိုင်းတာမှုတိကျမှုလိုအပ်ချက်များကြောင့်၊ ကင်မရာ resolution အတွက် လိုအပ်ချက်များမှာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပါသည်။ သေးငယ်သော နှင့် အလတ်စား အလုပ်အပိုင်းအတွက် တိကျမှုနည်းသော လိုအပ်ချက်များနှင့် အတိုင်းအတာများကို တူညီသော လေယာဉ်ပေါ်တွင် တိုင်းတာသည့် ကင်မရာတစ်လုံးသည် များသောအားဖြင့် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ အရွယ်အစား ကြီးမားသော၊ တိကျမှု မြင့်မားသော workpieces များနှင့် တူညီသော လေယာဉ်ပေါ်တွင် မရှိသော အတိုင်းအတာများကို တိုင်းတာခြင်းအတွက်၊ ကင်မရာများစွာကို ရိုက်ကူးရန် များသောအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။
အမြင်တိုင်းတာမှုစနစ်၏ အလင်းရင်းမြစ်ရွေးချယ်မှုသည် အဓိကအားဖြင့် တိုင်းတာရမည့်အရာဝတ္ထု၏ အသွင်အပြင်ကို မီးမောင်းထိုးပြခြင်းအပေါ် အခြေခံသည်။ အရွယ်အစား တိုင်းတာရာတွင် အသုံးများသော အလင်းရင်းမြစ်များမှာ နောက်ခံအလင်း၊ coaxial light နှင့် low-angle light source များဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် တိကျမှုမြင့်မားသော လိုအပ်ချက်များရှိသည့် application များတွင် parallel light source များလည်း လိုအပ်ပါသည်။
အမြင်အာရုံတိုင်းတာခြင်းစနစ်မှန်ဘီလူးများသည် အများအားဖြင့် telecentric မှန်ဘီလူးများကို အသုံးပြုကြသည်။ တယ်လီဗဟိုထရစ်မှန်ဘီလူးသည် သမားရိုးကျစက်မှုမှန်ဘီလူး၏ parallax ကို ပြုပြင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ အရာဝတ္တုအကွာအဝေးတစ်ခုအတွင်း၌ ရရှိသော ရုပ်ပုံချဲ့ထွင်မှုသည် ပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပါ။ တိုင်းတာသည့်အရာဝတ္တုသည် တူညီသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မရှိသည့်အခါ ၎င်းသည် အလွန်အရေးကြီးသောဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသော optical ဝိသေသလက္ခဏာများ- မြင့်မားသောကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ အလွန်ကျယ်ပြန့်သော အကွက်အတိမ်အနက်၊ အလွန်နိမ့်သောပုံပျက်ခြင်းနှင့် အပြိုင်အလင်းဒီဇိုင်းကို အခြေခံ၍ တယ်လီဗဟိုထရစ်မှန်ဘီလူးသည် စက်အမြင်တိကျမှုတိုင်းတာခြင်း၏ မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
1. တိကျမှုမြင့်မားသော အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ သဘောတရား၊ အရေးပါမှုနှင့် ဝိသေသလက္ခဏာများ။ မြင့်မားသော အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် တိကျသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို အခြေခံထားသည်။ ပေါင်းစပ်သီအိုရီနှင့် နည်းပညာသည် ကွန်ပျူတာဂုံးဖြင့် ပြုပြင်ခြင်း၏ အော်ဂဲနစ်ပေါင်းစပ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထားသော workpiece ၏ တည်ဆောက်ပုံနှင့် လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ကျက်စားခြင်း၊ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ကိုင်တွယ်ခြင်း၏ အော်ဂဲနစ်ပေါင်းစပ်မှုကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပြီး စီမံဆောင်ရွက်သည့်အခြေအနေအောက်တွင် အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်မှုကို အပြီးသတ်နိုင်သည်။
၂။ နိုင်ငံခြား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေကို လေ့လာခြင်း။ တိကျမှုမြင့်မားသော စက်ယန္တရားများ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသည် 20 ရာစု၏ အဓိကနည်းပညာများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ချီးကျူးခံရပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံများက အလွန်တန်ဖိုးထားကြသည်။
3. ကျွန်ုပ်နိုင်ငံ၏ တိကျမှုမြင့်မားသော စက်ယန္တရားများ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသည် ၁၉၈၀ ခုနှစ်များနှောင်းပိုင်းနှင့် ၁၉၉၀ ခုနှစ်များအစောပိုင်းတွင် တဖြည်းဖြည်း ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပြီး ယနေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိကျမှုမြင့်မားသော စက်ယန္တရားများ ထုတ်လုပ်ရေး ထုတ်ကုန်များကို စစ်ဘက်နှင့် အရပ်ဘက် နယ်ပယ်များတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုနေကြပြီး နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကုသမှု၊ အာကာသယာဉ်နှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်း စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
4. တိကျမှုမြင့်မားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းသည် မြင့်မားသောတိကျမှု၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသော၊ လိုက်လျောညီထွေရှိသော ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း၏ အားသာချက်များရှိသည်။ ထုတ်လုပ်မှုစနစ်တစ်ခုလုံး၏ အရွယ်အစားနှင့် တိကျသော အစိတ်အပိုင်းများကို လျှော့ချခြင်းသည် စွမ်းအင်ကို သက်သာစေရုံသာမက စွမ်းအင်ချွေတာပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ထုတ်လုပ်မှုပုံစံနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်မှုနေရာနှင့် အရင်းအမြစ်များကိုလည်း သက်သာစေပါသည်။ ၎င်းသည် အစိမ်းရောင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလမ်းညွှန်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
5. တိကျမှုမြင့်မားသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ အသုံးချနယ်ပယ်များ အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်း-သိပ္ပံနည်းကျတူရိယာများ၏ ထောက်လှမ်းမှုဆိုင်ရာကိရိယာများတွင် တိကျမှုမြင့်မားသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုကြသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ၎င်းတို့ကို သိပ္ပံနည်းကျ တူရိယာလုပ်ငန်းတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။
6. သာမာန်စက်ယန္တရားများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တိကျသောစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ (ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှု) မြင့်မားသော၊ ခေတ်မီဆန်းပြားသော စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် စက်ကိရိယာများ၊ ပေါင်းထည့်ထားသော တန်ဖိုးကြီးမြင့်မှုနှင့် အသေးစားအသုတ်ရောင်းချမှုများရှိသည်။
တိကျသေချာသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သာမန်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ၏ ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများနှင့် နည်းပညာများနှင့် ကွဲပြားသည့် "သေးငယ်သော စက်ကိရိယာများကို ပြုပြင်ခြင်း" သဘောတရားကို သိရှိနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ ဆီလီကွန်မဟုတ်သော ပစ္စည်းများ (ဥပမာ- သတ္တုများ၊ ကြွေထည်များ စသည်တို့) ၏ တိကျမှုမြင့်မားသော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ထိရောက်သော စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တိကျသော တူရိယာအစိတ်အပိုင်းများ၏ လုပ်ဆောင်မှုနည်းလမ်းများတွင် ပြဿနာများကို အခြေခံကျကျ ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
Lathe သည် လှည့်ခြင်းကိရိယာကို အဓိကအားဖြင့် လှည့်ပတ်သည့်ကိရိယာကိုအသုံးပြုသည့် စက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အစမ်းလုပ်ခြင်း၊ ကောက်နုတ်ခြင်း၊ ကောက်နုတ်ခြင်း၊ ပုတ်ခြင်း၊ အသေများနှင့် ချည်ထိုးကိရိယာများကို သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
1. ကြီးမားသော ကြိမ်နှုန်းနိမ့် torque နှင့် တည်ငြိမ်သော output ။
2. စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် vector ထိန်းချုပ်မှု။
3. torque dynamic response သည် မြန်ဆန်ပြီး speed stabilization တိကျမှု မြင့်မားသည်။
4. အရှိန်လျှော့ပြီး အမြန်ရပ်ပါ။